Farmaajo oo safarkiisii Koongo soo gaabiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo safarkiisii Koongo soo gaabiyay
Madaxweyne Farmaajo oo xalay fiidkii ka duulay magaalada Muqdisho, saakayna lagu soo dhaweeyay garoonka Kinshaasa ayaa la kulmay madaxweynaha waddankaasi, waxaana lagu wadaa inuu dib uga soo laabto Koongo
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa isagoo niyad-jabsan wuxuu caawa kasoo duulayaa magaalada Kinshaasa ee xarunta waddanka Koongo, kaddib markii uu ku guul darreystay qorshihii safarkiisa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho ku soo laabanaya, waxa uuna soo gaabiyay safarkiisii loo qorsheeyay inuu qaato muddo laba maalin ah, caawa isla habeenimo ayuu kasoo ambabixi doonaa xarunta waddankaasi ee Kinshaasa.
Sida ay Keydmedia Online ku heshay warar hoose wuxuu waji gabax kala soo kulmay safarkii uu ku tagay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo. Ujeedada safarkiisa ayaa ahaa in uu ka codsado Madaxweynaha Koongo oo hada ah Gudoomiyaha Midowga Afrika in uu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixin ay soo wadaan Golaha Amaanka ee QM iyo Midowga Afrika oo lagu diidanyahay mudo kororsiga sharci darada ah ee uu samaystay Farmaajo.
Markii uu diidmo qayaxan kala kulmay madaxweynaha midowga Afrika ayuu go'aansaday madaxweyne Farmaajo in uu soo gaabiyo safarkiisa, dalkana dib ugu soo laabto isagoo weli ku jira xaalad jaha-wareer oo qasan taasoo ka dhalatay muddo kororsigii uu Golaha Shacabka ku dhawaaqay 12 April kaasoo golayaasha dowladda loogu kordhiyay muddo xileedkooda 2 sano oo dheeri ah!